Bit By Bit - Idebe ihe omume - 2.3.1.2 Always-on
Always-on nnukwu data na-enyere ndị na-amụ na-atụghị anya ihe omume ndị na ezigbo oge mmesho.
Ọtụtụ nnukwu data na usoro bụ mgbe niile-on; ha na-mgbe niile obon data. Nke a mgbe niile-na e ji mara na-enye na-eme nnyocha na longitudinal data (ie, data karịrị oge). Ịbụ mgbe niile-na nwere ihe abụọ dị mkpa pụtara n'ihe nnyocha.
Mbụ, mgbe niile-on data collection na-enyere ndị nnyocha na-amụ na-atụghị anya ihe omume ndị na ụzọ na-adịghị ekwe omume na mbụ. Dị ka ihe atụ, na-eme nnyocha mmasị na-amụ ogide Gezi ngagharị iwe na Turkey n'oge okpomọkụ nke 2013 ga-a elekwasị anya na omume nke protesters n'oge ihe omume. Ceren Budak na Duncan Watts (2015) na-enwe ike ime ihe site na iji mgbe niile-on ọdịdị nke Twitter na-amụ Twitter-eji protesters n'ihu, n'oge na mgbe ihe omume. Na, ha bụ ndị enwe ike ike a tụnyere ìgwè nke ndị na-abụghị sonyere (ma ọ bụ sonyere na-adịghị tweet banyere mkpesa) tupu, n'oge, na mgbe ihe omume (ọgụgụ 2.1). Na ngụkọta ha bụbu-post panel gụnyere tweet nke mmadụ 30,000 bi karịrị afọ abụọ. Site augmenting na-ejikarị data site ngagharị iwe na a ozi ndị ọzọ, Budak na Watts nwee ike ịmụta ọtụtụ ihe ndị ọzọ: ha nwee ike na-eme atụmatụ ihe di iche iche nke ndị mmadụ yikarịrị ka ha isonye na Gezi ngagharị iwe na-eme atụmatụ na mgbanwe n'omume nke sonyere na-abụghị ndị sonyere, ma na-adịghị adịte aka (atụnyere tupu Gezi ka n'oge Gezi) na na na-okwu (atụnyere tupu Gezi biputere-Gezi).
Ọgụgụ 2.1: Design-eji Budak and Watts (2015) na-amụ ogide Gezi ngagharị iwe na Turkey n'oge okpomọkụ nke 2013. Site n'iji mgbe niile-on ọdịdị nke Twitter, ndị na-eme nnyocha kere ihe ha na-akpọ onye bụbu-post panel nke gụnyere ihe mmadụ 30,000 bi na ihe karịrị afọ abụọ. N'ụzọ dị iche na-ahụkarị ọmụmụ nke lekwasịrị anya na sonyere n'oge ngagharị iwe, nke bụbu-post panel agbakwụnye 1) data site sonyere tupu mgbe ihe omume na 2) data si na-abụghị sonyere n'ihu, n'oge na mgbe ihe omume. Nke a enriched data Ọdịdị nyeere Budak na Watts ka na-eme atụmatụ ihe di iche iche nke ndị mmadụ yikarịrị ka ha isonye na Gezi ngagharị iwe na-eme atụmatụ na mgbanwe n'omume nke ndị keere òkè na-abụghị ndị sonyere, ma na-adịghị adịte aka (atụnyere tupu Gezi ka n'oge Gezi) na na na-okwu (atụnyere tupu Gezi biputere-Gezi).
Ọ bụ eziokwu na ụfọdụ n'ime ndị a kwuru nwere ike e mere na-enweghị mgbe niile-on data collection na isi mmalite (eg, ogologo oge kwuru nke àgwà mgbanwe), ọ bụ ezie na ndị dị otú ahụ data collection maka mmadụ 30,000 bi gaara nnọọ oké ọnụ. Na, ọbụna nyere na-akparaghị ókè ego, m nwere ike na-eche nke ọ bụla ọzọ usoro na nnoo na-enye ohere na-eme nnyocha na-eme njem azụ na oge na ozugbo edebe sonyere omume n'oge gara aga. The ezigbo ọzọ ga-anakọta retrospective akụkọ banyere omume, ma ndị a na-akọ ga-abachaghị granularity na-enyo enyo n'ụzọ ziri ezi. Isiokwu 2.1 na-enye ihe atụ ndị ọzọ nke ọmụmụ na-eji ihe mgbe niile-on data isi iyi na-amụ na-atụghị anya ihe omume.
Isiokwu 2.1: Studies na-atụghị anya ihe omume ndị na-eji mgbe niile-na nnukwu data isi mmalite.
atụghị anya ihe omume
Always-on data isi iyi
Ogide Gezi ije na Turkey Twitter Budak and Watts (2015)
Nche anwụ ngagharị iwe na Hong Kong Weibo Zhang (2016)
Ịgba égbè ndị uwe ojii na New York City Kwụsị-and-frisk akụkọ Legewie (2016)
Onye isonyere Isis Twitter Magdy, Darwish, and Weber (2016)
September 11, 2001 agha livejournal.com Cohn, Mehl, and Pennebaker (2004)
September 11, 2001 agha pager messages Back, Küfner, and Egloff (2010) , Pury (2011) , Back, Küfner, and Egloff (2011)
Nke abụọ, mgbe niile-on data collection na-enyere ndị nnyocha na-emepụta ezigbo oge nha, nke nwere ike ịbụ ihe dị mkpa na ntọala ebe amụma eso ụzọ chọrọ bụghị naanị na-amụta site ẹdude omume kamakwa azaghachi ya. Dị ka ihe atụ, mmadụ mgbasa ozi data nwere ike iji na-eduzi Ibọrọ ọdachi (Castillo 2016) .
Ná mmechi, mgbe niile-on data na usoro nwee na-eme nnyocha na-amụ na-atụghị anya ihe omume ndị na-enye ezigbo oge ozi amụma eso ụzọ. Adịghị m, Otú ọ dị, gwa Abigel na nke ahụ mgbe nile-on data na usoro nwee na-eme nnyocha iji soro mgbanwe n'elu ogologo oge. Nke ahụ bụ n'ihi na ọtụtụ nnukwu data sistemụ na-agbanwe mgbe nile-a usoro a na-akpọ nwayọọ (Nkebi 2.3.2.4).